Iincwadi zamaNazi zaseJamani
I-Nazi yaseJamani yamaNazi - uAdolf Hitler
I-Nazi yaseJamani yama-Nazi - umthetho wokuqala wamaNazi
I-Nazi Germany inqamlezo-ubomi kunye nomsebenzi
I-Nazi Germany inqamlezo-imvelaphi yobuNazi
I-Nazi yaseJamani yamagqabantshintshi-imigaqo-nkqubo yobuhlanga
IJamani yamaNazi i-crossword - indlela eya emfazweni
I-Nazi Germany inqamlezo-I-Weimar Republic
Amaxwebhu aseJamani amaNazi
Imibuzo yamaNazi eJamani yamaNazi
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi - amanani achasene namaNazi
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi-izehlo ze-1918-23
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi-izehlo ze-1924-32
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi-izehlo ze-1933-39
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi - amaqela
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi - izimvo
Imibuzo yememori yaseJamani yamaNazi-iinkokheli
Imibuzo yeememori zaseJamani yamaNazi-imigama kunye neengcinga (I)
Imibuzo yeememori zaseJamani yamaNazi-imigama kunye neengcinga (II)
Kwimemori yamaNazi yaseJamani
Imibuzo yeJamani yamaNazi - imigaqo-nkqubo yezoqoqosho
Imibuzo yeJamani yamaNazi - uHitler
Imibuzo yeJamani yamaNazi-ubomi kunye nomsebenzi
Imibuzo yeJamani yamaNazi - imigaqo-nkqubo yobuhlanga
Imibuzo yeJamani yamaNazi-ilizwe lamaNazi
Imibuzo yeJamani yamaNazi-NSDAP
Imibuzo yamaJamani amaNazi-indlela eya emfazweni
Imibuzo yeJamani yamaNazi-IRiphabliki yaseWeimar
Kwanyikima iJamani yamaNazi
Izihloko zaseJamani zamaNazi
IJamani yamaNazi ngubani
Igama laseJamani lamaNazi laseJamani-iingqondo
I-Nazi yaseJamani igama elithi - abantu
I-Nazi yaseJamani igama elithisesearch - iindawo
AmaJamani amaNazi aseJamani
Ibali Jamani eJamani ibangele umdla kwaye yamangalisa izigidi zabantu. Yaqala ngokusilela kweRiphabhlikhi yeWeimar kwaye yaphela ngeenkxwaleko zeMfazwe yesibini yeHlabathi kunye nokuBulawa kwabantu ngenkani. Embindini, ubuNazi buchaphazele izigidi zabantu kwaye batshintsha ikhondo lanamhlanje.
AmaNazi beliliqela lesizwe elinamandla elalizenza iqela labo lezopolitiko kwi1919. Khokelwa ngu Adolf Hitler, owayesakuba ngumdidiyeli owayesebenze kwiMfazwe Yehlabathi I, umbutho wamaNazi wahlala umncinci kwaye ungafanelekanga uninzi lwe1920s.
Ukuqala kwe Great Depression kunye nefuthe elibi elivelayo eJamani yabona uHitler kunye namaNazi badonsa inkxaso engaphezulu. AmaNazi aziveze njengento entsha nenketho enokubakho kubantu baseJamani abanqwenela. Kwakukho into encinci ngoHitler kunye namaNazi, nangona kunjalo. Uninzi lwezinto abazibonileyo - amandla ombuso, ulawulo olunamandla, ukuthanda ubuzwe, ubuhlanga buka-Darwinism, ubunyulu bobuhlanga, ukubuyisela umlo emkhosini kunye noloyiso - izimvo zexesha elidlulileyo, hayi ezekamva.
Nge-1930, amaNazi ebeyeyeqela elikhulu eJamani Reichstag (ipalamente). Le nkxaso inegalelo kwi Ukuqeshwa kuka-Adolf Hitler njengo chancellor ngoJanuwari 1933.
UHitler kunye nabalandeli bakhe babephethe igunya iminyaka elishumi elinambini kodwa impembelelo yabo kwiJamani yayinkulu. Kwiminyaka nje embalwa, amaNazi ayibulale idemokhrasi kwaye Yila ilizwe elinomntu omnye.
Ubomi bezigidi zamaJamani batshintshiwe, ezinye zabangcono, uninzi lwaba lubi. Women bayalelwa ukuba babuyiselwe ezindlini kwaye bangaqukwa kwezopolitiko nakwindawo yokusebenza. abantwana babengafundanga ngeembono kunye nexabiso lobuNazi. Izikolo kunye neendawo zomsebenzi zatshintshwa ukuze zizalisekise iinjongo zamaNazi. Ubuthathaka okanye ukuphazamisa amaqela entlalontle okanye ubuhlanga - ukusuka MaYuda kwi ukugula ngengqondo -Bakhutshelwa ngaphandle okanye bashenxiswa.
AmaNazi nawo alingcolisa ilizwe Ukuvuselela ubundilele eyayingenise iJamani kwiMfazwe Yehlabathi I kumashumi amabini eminyaka ngaphambili. Okokugqibela, kwii-1930s ezisekupheleni, uHitler waqala ngokwandisa indawo yaseJamani, umgaqo-nkqubo obangele imfazwe eyabulala kakhulu kwimbali yoluntu.
I-Website yeJamani yeJamani yeNazi yeJamani sisixhobo esibalulekileyo somgangatho wokufunda esonyuka ngokunyuka kwamaNazi neJamani phakathi kwe1933 kunye ne1939. Inamakhulu oovimba bolwazi abahlukileyo kunye nabasekondari, kubandakanya neenkcukacha izihloko ezizihloko kwaye amaxwebhu. Iwebhusayithi yethu inezinto zokubhengeza ezifana amaxesha abekiweyo, Iglosari, ngubani 'kwaye ngubani ulwazi imbali. Abafundi banako ukuvavanya ulwazi lwabo kwaye bakhumbule ngothotho lwezinto ezenziwa kwi-Intanethi, kubandakanya Imibuzo, amagama anqamlezayo kwaye ukujonga amagama. Imithombo ephambili eceleni, konke okuqulathwe yiAlfa Imbali kubhalwa ngootitshala abanolwazi nabanamava, ababhali kunye nababhali bembali.
Ngaphandle kwemithombo ephambili, yonke imixholo kule webhusayithi © Imbali ye-2019. Lo mxholo awunakukopishwa, upapashwe ngokutsha okanye usasazwe ngokutsha ngaphandle kwemvume ecacileyo yezeMbali yeAlfa. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokusetyenziswa kwewebhusayithi yeAlfa yeMbali kunye nomxholo, nceda ubhekise kuthi Imigaqo yokuSebenzisa.
I-Quizzes ezikhethiweyo ezininzi